စုချစ်သူ: January 2011
The People CRY, we CRY
The People LAUGH, we LAUGH
The People HATE, we HATE
We must reflect the people!!!
We must sacrifice for the people!!!
Posted by စုချစ် at 1/27/2011 10:57:00 PM3comments:
Posted by စုချစ် at 1/04/2011 08:50:00 PM9comments:
cartoon get from here
ပြက္ခဒိန်စောင့်မျှော်နေတဲ့ အစ်ကို အစ်မ မောင် ညီမများကို သတင်းစကားလေး ပါး ပါတယ်နော်...။
ထုံးစံအတိုင်း အပျင်းလေး နည်းနည်း ထူမိတာရယ်... ကပ်မှ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ထားတာ နှစ်ကူးခါနီးမှာ မလုပ်မဖြစ် အလုပ်တွေပေါ်လာပြီး နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့...။
၂၀၁၁ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ပြက္ခဒိန်လေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး အမြန်ဆုံး တင်ပေးပါမယ်လို့ နော်...။
မင်္ဂလာ နှစ်သစ် ၂၀၁၁ခုနှစ် မှာ ဘလော့ ဖတ်လာ မိတ်သဟာများ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံကြစေရန်.... မင်္ဂလာ ဆုတောင်း သီချင်းလေးနဲ့ ဧည့်ခံလိုက်ပါတယ်လို့.....။
မေတ္တာများစွာဖြင့် ... စုချစ်
Posted by စုချစ် at 1/04/2011 11:30:00 AM5comments:
Labels: Greeting, Notice